ဆေးရုံပေါ်က ပါးကွက်နဲ့ သရဲ… ( ကိုယ်တွေ့ဖြစ်ရပ်လေးပါ…)…
၂၀၀၇ သြဂုတ်လမှာ.. ကျွန်မမိခင်.. အမျိုးသမီး..ရောဂါတစ်ခုကြောင့်.. မြောက်ဥက္ကလာဆေးရုံမှာ.. ၂ လခန့်ကြာအောင်.. ဆေးကုသမှုခံယူရပါတယ်.. ဆေးရုံဆိုတော့.. သိတဲ့အတိုင်း မည်သူမှ.. သွားချင်တဲ့..နေရာ.. မဟုတ်ပေမယ့်.. တကယ်တမ်း.. ဖြစ်လာတော့လည်း.. သွားရတာပါပဲ.. ၂ လဆိုတဲ့.. သက်တမ်းမှာ.. အဲ့ဒီဆေးရုံအကြောင်းမှာရှိတဲ့..ပေတတွေရဲ့..အကြောင်းကို.. သိလာရတဲ့အပြင်.. ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပါ… ကြုံခဲ့ရပါတယ်.. ဆေးရုံမှာ.. ရေခဲတိုက်ပါရှိတော့.. နေ့စဉ်.. သေနေတဲ့.. သူတွေကို… သံအုပ်ဆောင်း အခေါင်းနဲ့..ခေါ်ခေါ်သွားတာကိုလည်း.. မြင်ရပါများလို့..ရိုးနေပါပြီ…
လူသေလို့. သံအုပ်ဆောင်း အလွတ်နဲ့..လာခေါ်ရင်.. ဂလုန်းဂလုန်း နဲ့..အသံကလည်း.. ညဘက်ဆိုရင်..စိတ်ခြောက်ခြားဖွယ်ရာပါ.. လူသေကို.. ရေခဲတိုက်ခေါ်သွားတဲ့..လုပ်သားတွေကလည်း.. ညဆိုရင်.. အရက်ကို… မူးအောင်.. သောက်ပြီးမှ.. ရေခဲတိုက်ထဲကို.. ၀င်ရဲတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလည်း.. တဆင့်စကားနဲ့.. သိရပါတယ်.. ကျွန်မကိုယ်တိုင်ကလည်း.. သရဲဆို… သေလောက်အောင်.. ကြောက်တတ်ပေမဲ့.. ငယ်ငယ်ထဲက.. သရဲကားဆိုရင်.. မကြည့်ရမနေနိုင်ပဲ.. ယပ်တောင်ကြားက.. ခိုးကြည့်ရင်းနဲ့. ၁ ကားလုံးပြီးတဲ့အထိကြည့်သူပါ…. အသုဘသွားပို့ရင်လည်း.. လူသေရဲ့… လက်တို့.. ခြေထောက်တို့ကို.. သွားကိုင်ကြည့်တတ်တယ်..
ညအိပ်တော့မှ… စောင်ကြီးခေါင်းမူးခြုံပြီး… ငါကိုင်ခဲ့တာကြီးက.. အေးစက်နေတာပဲဆိုပြီး.. ကြောက်ရတဲ့.. အရသာကို.. တစိမ့်စိမ့်နဲ့.. ခံစားတတ်သူပါ… ဒီတော့.. ဆေးရုံရောက်တုန်းလည်း.. ဘယ်နေလိမ့်မလဲ… ဘေးကုတင်က. လူနာစောင့်ကို.. အဖောစပ်ပြီး.. ရေခဲတိုက်.. ဘက်ကို.. နေ့ခင်းဘက်.. သွားစပ်စုလိုက်သေးတယ်… သရဏံဂုဏ်.. တင်တဲ့ဇရပ်လည်း.. ရေခဲတိုက်အရှေ့မှာ..ရှိပါတယ်..
နေ့တိုင်းနေ့ရော ညရော.. တွန်းတွန်းနေတဲ့.. လူသေတင်တဲ့.. လှည်းနဲ့.. အခေါင်း တခုကိုလည်း.. အဲ့ဒီ့အနီးတ၀ိုက်မှာပဲတွေ့တယ်… လူသေတွေရှိတဲ့… နေရာမို့လို့လားပဲ..မသိပါဘူး….. တကယ့်ကို.. တစပြင်ပါပဲ… ဆေးရုံနားတ၀ိုက်မှာ.. ဟိုဟိုဒီဒီ… တွန်နေတဲ့… ငှက်ကလေးတွေအသံကိုတောင်.. အဲ့ဒီ့နားမှာ.. မကြားရဘူး.. ကျီးကန်း ၂ ကောင်.. ၃ ကောက်လောက်.. အာနေတဲ့..အသံပဲ.ကြားရတယ်… နေ့ခင်းတောင်.. ခြောက်ခြားစရာပါပဲ…
ရေခဲတိုက်က..မှန်တွေကိုတော့… သတင်းစာစက္ကူတွေ.. ကပ်ထားတယ်.. အထဲကိုတော့.. လှမ်းကြည့်လို့မရပါဘူး.. ကျွန်မတို့ ၂ယောက်လည်း.. အဆောက်အဦး.. တ၀က်အထိပဲရောက်လိုက်တယ်.. အဆုံးအထိသွားဖို့ကို… ကိုယ့်စိတ်က..ခွင့်မပြုဘူး… ဒါနဲ့ပဲ.. ပြန်လှည့်ခဲ့ကြတယ်…
ဒီကြားထဲမှာ.. မွေးဖွားဆောင်ဘက်မှာလည်း.. ခဏခဏ.. သရဲခြောက်တယ်ဆိုတဲ့.. အသံတွေ.. ကြားရပါတယ်.. ညဘက်ကို… ညည်းသံကြားရတာတွေ… နာ့စ်တစ်ယောက်… လူနာကြည့်ပြီး အပြန်မှာ.. သူ့ဘေးနားက.. ခေါင်းမပါပဲ.. ကိုယ်ကြီးသက်သက်.. ဖြတ်သွားတာတွေ… ဆရာဝန်မ တစ်ယောက်.. ညဘက်.. ဂျူတီကျလို့.. နားနေခန်းမှာ.. ၀င်အိပ်နေတုန်း… ဘေးနားမှာ.. သရဲက.. ယပ်လာခပ်ပေးနေတာတွေ.. မျိုးစုံပါပဲ… အော်.. ဒါနဲ့… မွေးဆောင်နဲ့. ကျွန်မတို့.. အမျိုးသမီးဆောင်နဲ့က.. မျက်နှာချင်းဆိုင်ပါ…..
မွေးဆောင်အပြင်ဘက်က.. ကော်ရစ်တာမှာတော့. လူတွေ.. ရှုပ်နေတာပါပဲ.. အမျိုးသားတွေက… မွေးဆောင်မှာ.. ညမအိပ်ရဘူးဆိုတော့.. မွေးဖွားသူ.. ယောက်ျားတွေနဲ့.. ကလေးတွေ.. အမျိုးတွေနဲ့.. ကော်ရစ်တာမှာ.. ပြည့်နေတာပါပဲ…. ကဲ.. ထားပါတော့.. လိုရင်းက.. အခုမှ.. ရောက်မှာ…. အဲ့ဒီ့နေ့ညက.. မိုးလေး.. ခပ်ဖွဲဖွဲရွာနေတယ်.. ဒီတော့…. ကျွန်မတို့အခန်းမှာ.. ပြူတင်းပေါက်.. တံခါးတွေကို.. အားလုံးနီးပါ.. ပိတ်ထားတယ်… အခန်း၁ ခန်းမှာ.. ကုတင်က.. ၁၅ လုံး.. ၁၆ လုံးခန့်.. ခြေရင်းခြင်းဆိုင်ပြီးတော့.. ထားထားပါတယ်… အခန်းက.. အမျိုးသမီးဆောင်မှာ.. စုစုပေါင်း.. ခန်းမကျယ်.. ၃ ခန်းရှိတယ်… အခန်းတွေတိုင်းမှာ… ထွက်ပေါက်က… ၂ ခုရှိပါတယ်…
ကျွန်မတို့က.. အမျိုးသမီးဆောင်.. ၀င်ဝင်ချင်း ပထမဆုံးအခန်း…. အဲ့ဒီ့နေ့က.. ကျွန်မတို့ဘေးကုတင်က.. လူနာဆင်းသွားတော့.. ကျွန်မမိခင်က.. အဲဒီ့.. ကုတင်မှာ.. သွားအိပ်ပါတယ်… ခါတိုင်းက.. ကုတင်၁ ခု ထဲမှာပဲ.. သားအမိ၂ ယောက်… အိပ်တယ်.. ထားပါ.. အဲ့နေ့ကတော့.. ကျွန်မ.. ၁ ယောက်ထဲ.. လူနာကုတင်မှာ.. အိပ်နေတာပေါ့နော်… ည ၃ နာရီလည်း ထိုးရော.. ကျွန်မရုတ်တရက်.. နိုးလာပါတယ်
လူတိုင်း ညဘက် အိပ်နေရင်း တရေးနိုးဖူးကြမှာပါ… ဒါပေမဲ့.. အိပ်ချင်မူးတူးတော့..ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်.. ကျွန်မနိုးလာပုံက.. အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး.. နိုးနိုးချင်း.. ခေါင်းက.. ကြည်နေတာပဲ.. အမြင်လည်းကြည်နေတယ်… မျက်နှာချင်းဆိုင်က.. ဆေးရုံနာရီကြည့်လိုက်တော့.. ၃ နာရီ.. တိတိ… လူကလည်း.. ကြည်ကြည်လင်လင်နိုးလာတော့.. အူကြောင်ကြောင်ဖြစ်နေတယ်.. အဲ့ဒီအချိန်မှာ.. ခြေသံ. တဖျပ်ဖျပ်.. ကြားရပါတယ်..
အမျိုးသမီးဆောင်.. အ၀င်ပေါက် ညာဘက်က..လျှောက်လာတာပါ… စောစောက.. ကျွန်မပြောသလို.. မိုးရွာလို့.. တခါးတွေအားလုံးပိတ်ထားပေမဲ့… ဘယ်ဘက်က.. ၀င်ပေါက်ကတော့…တခြမ်းပဲ.. စေ့ထားပါတယ်.. လျှောက်လာတာက.. မိန်းမတစ်ယောက်ဆိုတာကို.. ပိတ်ထားတဲ့… တံခါးမှန်တွေထဲက.. မြင်ရပါတယ်.. ပုပု.. ၀၀… ကျွန်မလည်း.. သတိလက်လွတ်ပဲ.. သူလျှောက်ရင်းပေါ်လာတဲ့.. တံခါးမှန်တိုင်းကို… လိုက်ကြည့်နေမိတယ်..
စိတ်ထဲမှာလဲ.. ဘယ်ဘက်က.. တံခါးမကြီးရောက်ရင်.. သူ့ကို.. တကိုယ်လုံးမြင်ရမယ်ပေါ့… ဒါနဲ့.. သူက.. တခြမ်းပိတ်ထားတဲ့… တံခါးကို..ရောက်တော့.. တုံ့ခနဲ.. ရပ်လိုက်တယ်…. ပြီးတော့.. အခန်းထဲကို..လှမ်းကြည့်ပါတယ်.. သူ့ကိုလည်း.. ကျွန်မ.. မြင်နေရပြီ… စစ်အင်္ကျီလက်ရှည်ကို.. တံတောင်နားအထိ.. ခေါက်ပြီးဝတ်ထားတယ်… စစ်အင်္ကျီဆိုတော့.. ရင်ဘက် ၂ ဖက်လုံးက.. အိတ်၂ အိတ်ကိုတောင်..မြင်ရတယ်.. အသားက.. ခပ်ညိုညို… ပါးအပြည့်မှာလည်း…. ပါးကွက်လိုမျိုး.. ဖြူဖြူနှစ်ဖက်က..ထင်းနေပါတယ်..
သူကလည်း.. ကျွန်မကို..ကြည့်နေတယ်.. ကျွန်မကလည်း.. ဒီမိန်းမ.. ဘာလာကြည့်နေတာလည်းဆိုပြီး.. ကုတင်ပေါ်မှာ… အိပ်နေရာက.. ထပြီး.. ခြေကြီးဆင်း ခါးကြီးကုန်းပြီး.. မျက်မှောက်ကုပ်ပြီးကြည့်နေမိတယ်.. အနည်းဆုံးတော့.. သူနဲ့.. ကျွန်မ..ကြည့်နေကြတာ.. စက္ကန့်၃၀ လောက်တော့..ကြာမယ်.. ကြည့်နေရင်းနဲ့… လမ်းလျှောက်သွားတာလည်းမဟုတ်.. ပျောက်သွားရော.. မျက်တောင်မခတ်ပဲ.. ကျွန်မ..ကြည့်နေမိလို့.. သူပျောက်သွားတယ်လို့.. တပ်အပ်ပြောနိုင်တာပါ…
ပျောက်သွားတော့.. အူကြောင်ကြောင်ဖြစ်သွားတယ်.. နောက်တော့.. ခေါင်းထဲ.. ၀င်လာတဲ့..အတွေးက.. ကျွန်မတို့.. အမျိုးသမီးဆောင်မှာ.. ညဘက်.. ၉း၀၀ ဆိုရင်… အဆောင်ကို… တာဝန်ကျ.. နာ့စ်တွေက… ပိတ်လိုက်ပါတယ်. ဘာလို့လဲဆိုတော့.. ဟိုဘက်မွေးဆောင်က.. လူနာရှင်တွေက.. အိမ်သာလာသုံးမှာ.. စိုးလို့ပါ…
လူနာစောင့်တွေ..များနေတော့..၀င်လိုက်ထွက်လိုက်နဲ့ဆိုရင်.. အမျိုးသမီးဆောင်က.. လူနာတွေ… မအိပ်ရမှာ..စိုးလို့ဆိုပြီးတော့.. .. ကျွန်မ..သတိရလိုက်တော့.. တံခါးက.. ပိတ်ထားတယ်.. ထိပ်ဆုံးခန်းဖြစ်လို့.. သူလျှောက်လာတဲ့ဘက်မှာလည်း.. အခန်းမရှိဘူး… ဒါဆိုရင်.. စောစောက.. မိန်းမကဘယ်ကလဲ…… !!!!!!
အဲ့တော့မှပဲ.. ဘေးကုတင်က.. အမေ့ကိုနှိုး… သရဲခြောက်ခံရတယ်.. အမေရေဆိုပြီး.. မိုးလင်းတဲ့အထိ.. အိပ်မပျော်တော့ပါဘူး… အမြဲလိုလို.. ကြောက်လိုက်ရတာနော်..အမှောင်ထဲဆိုမသွားရဲ… သရဲဆိုရင်… ဆံပင်က. ဖားယားကြီးနဲ့လား.. မျက်လုံးက.. ဘယ်လောက်… ပြူးလဲ.. လျှာက.. တန်းလန်းကြီးလားနဲ့… အမျိုးမျိုးပုံဖော်ကြောက်နေတာ… တွေ့လိုက်တော့လည်း… ခြောက်လို့.. ခြောက်မှန်းတောင်မသိ… သရဲလည်း.. စက္ကန်း ၃၀ လောက်.. ခြောက်ပြတာတောင်.. မျက်မှောင်ကုပ်ပြီးပြန်ကြည့်နေသဟ ဆိုပြီး စိတ်ပျက်သွားတယ်.. ထင်ပါရဲ့… နောက်၁နှစ်ခန့်အကြာမှာမှ.. သူငယ်ချင်းဆီက.. ပြန်သိလိုက်ရတာက… မြောက်ဥက္ကလာဆေးရုံမှာ.. ပါးကွက်.. သရဲရှိတယ်ဆိုပဲ… သူလည်း.. တဆင့်ကြားလာတာပါ..
ဒီတော့မှ.. ငါကြုံခဲ့ရတာ.. အဲဒီ့.. ပါးကွက်..သရဲပဲထင်တယ်..ဆိုပြီး…… စာအရေးအသားမကောင်းရင်.. ခွင့်လွှတ်ကြပါ… ပေတမှာ.. ၀င်ဝင်ဖတ်နေပေမဲ့.. အခုတလော.. ကုန်ကြမ်းရှားနေတယ်ဆိုလို့… အခုလို.. ၀င်ရေးရခြင်းပါ…. သရဲခြောက်ခံရတာလည်း.. အဲ့ဒါက… ပထမဆုံးနဲ့..နောက်ဆုံးပါပဲ.. နောက်ထပ်.. သူငယ်ချင်းရဲ့.. အဒေါ်.. ချီးစားစုန်းနဲ့..တွေ့တာလေးလည်း… အချိန်ရရင်.. ၀င်ရေးပါအုံးမယ်…
Credit: Su Zaw @ ပေတလောက စိတ်ဝင်စားသူများ